Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda Ogadenya ee dalka Eretreeya oo si Wanaagsan ugu dabaadgalay 30Guurada JWXO
Jaaliyadda Ogadenya ee dalka Eretreeya oo si Wanaagsan ugu dabaadgalay 30Guurada JWXO
Waxaa markay taariikh du ahayd 16-08-14 kulan aad ubalaadhan isugu yimid jaaliyada Ogaadenya ee wadanka Eretaria kaas oo ay jaaliyadu ugu dabaal dagaysay 30Guuradii Asaaska JWXO ee halganka kasocda Ogaadenya hormuudka u ah, waxaana kulan kaasi kasoo qaybgalay dhaman bulshada qaybaheeda kala duwan sida; culuma owdiinka, hooyooyinka, odayasha dhalinyarada iyo dhamaa waxgaradka Ogaadenya ee ku dhaqan xeryaha qaaxootiga ee wadankan Eratariya.
Shirkaasi oo ahaa mid qiira wadaniyeed uu shacabka ka muuqaday, ayaa waxaa shirka daadihinhayay hogaanka dhaqaalaha jaaliyada ogaadenya waxaana ugu horaynba makarafoonka lagu soo dhaweeyay sheekha jaaliyada sheekh Cabdi raxmaan kaas oo wacdi dini ah ka soo jeediyay madasha. Wacdiga ka dib, waxaa la qaaday heesta calanka Ogaadenya ka dibna waxaa makara foonka lagu soo dhaweeyay halgame Axmed sheekh Maxamed oo goobtaasi ka akhriyay taariikhda wadanka Ogaadenya iyo halgamadii kala duwanaa ee ay shacabka Ogaadenya soo galeen. Waxaa tarikhdaasi kadib shirka laga soo jeediyay warbixin ku saabsan khayraadka uu illaahay kumanaystay Ogadenya oo ay soo jeedisay halganto Hiba macalin Cabdi oo ah xubin katirsan OYSU.
Waxaa iyadna goobta laga soo jeediyay tariikhdii Ogaadenya loo gacan galiyay Itobiya oo uu Si hufan u akhriyay halgame Axmed Caydiid. Intaasi kadib waxaa munaasabada dabaaldaga jaaliyada Ogadenya ee wadanka Eretaria ugu dabaaldagaysay 30Guurahii JWXO laga akhriyay khubadii gudoomiyaha JWXO Admiraal Maxamed Cumar Cismaan, waxaana khudbadaasi jaaliyada u akhriyay gudoomiyaha ururka OYSU-Eretaria halgame Muxyadiin sheekh Cabdi Xuseen, waxaa ay shacbkii munaasabadaasi udabaal dagayay ay aad u dhagaysteen ulana dhaceen khudbadaasi gudoomiyaha JWXO waxaana is qabsaday sawaxan iyo sacab.
Si kastaba ha ahaatee kulankaasi oo ahaa mid ay qiira wadaniyeed shacabka ka muuqatay ayaa waxaa gabay gubaaba ah kasoo jeediyay Abwaan Cabdiraadir macalin Maxamed, gabaygaasi oo shacabka dhiiga dhaqaajiyay.
Isku soowadaduuboo kulankaasi oo ay ka hadleen odayaal farabadan ayaa waxaa kamid ahaa odayaashii gubaabada soo jeediyay Cabdi Yuusuf Faalug, Ugaas Deeq Cabdi raxmaan iyo Cabdulaahi Xasan Aadan oo ku magac dheer Cabdulaahi( dheeg) oo hadal kooban oo nuxurle kahadlay.
Waxaa ugu dambayntii kulankaasi khudbad gaaban oo dhinacyabadan taabnaysay kusoo xidhay gudoomiyaha jaaliyada Halgame Maxamed Xasan Yuusuf (maxamed Goday) waxaa intuu shirku socday kaalintii suugaanta kaga qayb qaatay kooxda qaranka ogaadenya ee Gurmad Qaran.